Scopolamine (စကိုပိုလမင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Scopolamine (စကိုပိုလမင်း)
Scopolamine (စကိုပိုလမင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Scopolamine (စကိုပိုလမင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Scopolamine (စကိုပိုလမင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အစာအိမ်နဲ့အူကဲ့သောအချို့သောအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ စစ်ထုတ်ပေးခြင်းကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ သင့်ရဲ့အစာအိမ်ကအန်ထွက်တာကို ဖြစ်စေတဲ့အာရုံကြောလှုံ့ဆော်မှုကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသစဉ်အတွင်း မေ့ဆေးထုံဆေးေကြောင့် သို့ ရွေ့လျားမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ မအီမသာဖြစ်ခြင်းနဲ့အော့အန်ခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့သုံးပါတယ်။
အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၊ ကြွက်သားတောင့်တင်းခြင်း၊ ပါကင်ဆန်ရောဂါစတာတွေကို ကုသရာမှာလည်းသုံးပါတယ်။
Scopolamine (စကိုပိုလမင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးညွှန်းစာမှာပါတဲ့အတိုင်း အကုန်လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ ပိုပြီး လျော့ပြီး သို့ အချိန်ပိုအသုံးပြုတာတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ရေအပြည့်တစ်ဖန်ခွက်နဲ့သောက်သင့်ပါတယ်။ အစာနဲ့တွဲပြီးသို့ အစာမပါဘဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်သုံးမယ်ဆိုရင် ရုတ်တရက်ဆေးရပ်လိုက်တာမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ရုတ်တရက်ရပ်လိုက်ခြင်းက သင့်အခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေနိုင်ပါတယ်။
Scopolamine (စကိုပိုလမင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
စိုထိုင်းဆရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့ဝေးဝေး အခန်းအပူချိန်မှာထားသင့်အပါတယ်။ ဆေးမပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ဖို့ ရေချိုးခန်းရေခဲသေတ္တာစတာတွေထဲမှာ မသိမ်းသင့်ပါဘူး။ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ပုံစံတွေလည်း ကွဲနိုင်ပါတယ်။ ဆေးညွှန်းမှာပါတဲ့အတိုင်း သေချာသိမ်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးဝေးမှာ ထားသင့်ပါတယ်။ ရေမြောင်းတွေအိမ်သာစတာတွေထဲကို ညွှန်ထားထားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင် သွန်ပစ်ခြင်းမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့နေ့ရက်ကျော်သွားပြီဆိုရင် သို့ မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုရင် သေချာစွန့်ပစ်သင့်ပါတယ်။ ဘယ်လိုစိတ်ချလက်ချစွန့်ပစ်နိုင်လဲဆိုတာတွေကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
Scopolamine (စကိုပိုလမင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
methscopolamine or hyoscyamine, သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
scopolamine သို့ methscopolamine or hyoscyamineကဲ့သို့သော အခြားအလားတူဆေးတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်တာတွေရှိမယ်ဆိုရင် မသုံးသင့်ပါဘူး။ အောက်ပါအချက်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်း မသုံးသင့်ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Scopolamine (စကိုပိုလမင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ နို့်တိုက်ကျွေးနေချိန်မှာ စိတ်ချလက်ချသုံးနိုင်တယ်လို့တော့ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ မသုံးခင်မှာ ရလာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကို သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ အမေရိကန် အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းအရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ချေအုပ်စု Cမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
Scopolamine (စကိုပိုလမင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆီးနည်းခြင်း သို့ ဆီးမသွားနိုင်ခြင်း
နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်ခြင်း သို့ တဒုန်းဒုန်းဆောင့်ခြင်း
အမြင်ဝါးခြင်း၊ သူငယ်အိမ်ကျယ်ခြင်း၊ အလင်းအထိမခံဖြစ်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Scopolamine (စကိုပိုလမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
potassium tablets/capsules, pramlintide.
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Scopolamine (စကိုပိုလမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Scopolamine (စကိုပိုလမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း၊ ဆီးအိတ်ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ဆီးသွားခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ
အစာရေမျိုပြွန်၊ အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ
ဦးခေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖူးခြင်း သို့ ဦးနှောက်အကျိတ်တည်ဖူးခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Scopolamine (စကိုပိုလမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အအန်သက်သာဆေးအနေဖြင့် – 0.3 to 0.65 mg အကြောဆေး၊ အသားဆေး၊ အရေပြားအောက် လိုအပ်သလို ၆နာရီကနေ၈နာရီတိုင်း
ခွဲစိတ်ပြီးနောက် မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ အန်ခြင်းအတွက်
1.5 mg transdermal disc နားအနောက်ပိုင်းမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ညနေပိုင်း ခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်ခင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ၂၄နှာရီဲကြာ ကပ်ထားသင့်ပါတယ်။ ကလေးမွေးမယ့်လုူနာတွေ အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် ကလေးကိုမထိတွေ့မိအောင် သားအိမ်မခွဲခင် တစ်နာရီကြိုပြီး ကပ်ထားသင့်ပါတယ်။
1.5 mg transdermal disc နားအနောက်ပိုင်းမှာ ၄နာရီကြိုပြီးတော့ ကပ်နိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်သလို ၃ရက်တိုင်းမှာတစ်ကြိမ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏ- 0.4 to 0.8 mgသောက်ဆေး ၈နာရီတိုင်း လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Scopolamine (စကိုပိုလမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
၁နှစ်ကနေ၁၂နှစ်ကလေးတွေအတွက်6mcg/kg/dose ( အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည့်ပမာဏ 0.3 mg/dose) အကြောဆေး၊ အသားဆေး၊ အရေပြားအောက် ၆နာရီကနေ၈နာရီတိုင်း လိုသလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အသက်၁၂နှစ်အထက်- 1.5 mg transdermal disc နားအနောက်ပိုင်းမှာ ၄နာရီကြိုပြီးတော့ ကပ်နိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်သလို ၃ရက်တိုင်းမှာတစ်ကြိမ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Scopolamine (စကိုပိုလမင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဆေးပြား 1.5 mg; 1 mg/mL; 0.4 mg/mL; 0.4 mg
https://www.drugs.com/mtm/scopolamine.html. Accessed July 5, 2017
Scopolamine Base Transdermal System. Accessed July 5, 2017